‘सैबैको बुढी म’ आईडीको त्यो पोस्ट « Kakharaa
१० भदौ, काठमाडौं । दुई दिदी र एक दाजुकी कान्छी बहिनी गोमा कार्की एसईई दिएर बसेकी थिइन् । ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका–१० की १६ वर्षीया उनको परीक्षाफल प्रकाशित हुन एक साता मात्र बाँकी थियो ।
गत असार ६ गते उनलाई दाजुले काठमाडौंबाट फोन गरे, ‘तिम्रो फोटो राखेर फेसबुकमा जे पायो त्यो लेख्ने को हो ?’ जवाफमा उनले ‘मलाई त केही थाहा छैन’ भन्नेवित्तिकै फोन काटियो । ‘थुप्रैपटक बहिनीलाई फोन सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि मोबाइल अफ भन्यो’, दाजुले भने, ‘बेलुकी एक्कासी बहिनीले आत्महत्या गरेको खबर सुन्नुपर्यो । ’
‘सबैको बुढी म’ भन्ने नाम राख्दै प्रोफाइल तस्बिर गोमाको राखिएको थियो । उनको फेसबुक पोस्टबाट तस्बिर कपी गरेर राखिएको आईडी फेक थियो । उक्त आईडी देखिसकेपछि दाजुले त्यो नचिनेको युजरलाई म्यासेज पनि पठाए, ‘किन यस्तो गरेको ? तँ को होस् ? कानुनी कारबाहीमा जाँऊ ?’ त्यो अज्ञात युजरले जवाफ फर्कायो, ‘जे गर्न सक्छस् गर् । तँलाई केको मतलब ?
समय त्यस्तै साँझको ५ः४५ । पिता लालबहादुर घरेलु हतियार धार लगाउन नजिकैको आरनतिर गएका थिए । आमा नन्दकुमारी बाख्रालाई घाँस काट्न भनेर जंगलतिर निस्केकी थिइन् । खाना बनाउने जिम्मा दिएर निस्केका आमाबुबा घरमा आइपुग्दा छोरीले कोठामा पासो लगाएर आत्महत्या गरिसेकेकी थिइन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।